Fifamoivoizana kendrena amin'ny alàlan'ny haino aman-jery sosialy | Fifamoivoizana hiara-miasa
by Beverly Little on Enga anie 10, 2021 Leave a Comment
Social Media ho an'ny orinasa madinidinika maro dia fitaovana marketing mora vidy izay afaka manampy amin'ny fampitomboana ny faneken'ny marika, ny fisiana an-tserasera ary ny fanoloran-tenan'ny mpanjifa. Tsy dambam-baravarankely na fanamboarana haingana ary ny toetsaintsika manatona azy dia hisy fiantraikany amin'ny fahombiazantsika na tsy fahombiazantsika.
09/24/2021 08:40 maraina GMT
Raha toa ny tambajotra sosialy dia manakaiky ny fotony mitovy amin'ny haino aman-jery mahazatra, minoa dokambarotra momba ny taratasy sy ny famoahana, takelaka sns, dia tsy fahombiazana izany. Ny haino aman-jery mahazatra dia mifanaraka amin'ny fomba marketing totalinay, kanefa tsy izany ny teknika tokony horaisintsika rehefa mizara amin'ny tambajotra sosialy.
Ny tambajotra sosialy dia mila fiovan'ny paradigma amin'ny fomba inoantsika fa hahatratra ny tanjontsika lasibatra tsena. Raha tokony hanolotra sy hampahafantatra izy ireo, ny fanampiana sy ny famatsiam-bola - ary ny zava-drehetra dia ny momba ny tsenanay kendrena.
Rafitra eo amin'ny fototra mafy orina
Ny fametrahana rafitry ny fahombiazana amin'ny haino aman-jery sosialy dia mety ho sarotra sy diso hevitra diso haingana. Taloha, ity dia mety nanolotra doka hafahafa tao amin'ny Facebook, tsy nifandray tanteraka tamin'ny orinasanay ary tsy dia nifantoka tamin'ny mpihaino kendrena, novolavolaina mba hahatonga ny olona ho tia ny pejinay Facebook ary hampitombo ny isan'ny mpankafy anay.
VAKIO IZANY Inona no azon'ny plugins Wordpress atao aminao?
Matetika ireo isa mpankafy / mpanaraka novidiana ireo dia maneho ny olona any amin'ny faritra hafa amin'izao tontolo izao izay tsy misy liana na iza na iza amintsika tolotra sy ny entana, tsy lazaina intsony ny fitaovana avoakanay amin'ny Internet. Hey, tsara be ilay izy. Miaraka amin'ny fotoana sy ny fitomboan'ny tambajotra sosialy, ny ankamaroantsika dia nanaiky tokoa fa ireo mpankafy sy mpankafy 'novidina' ireo dia tena tsy misy ilana azy raha toa ka mikasika ny fananganana marika lehibe ny orinasan-tserasera sy ny orinasanay.
Rehefa mijery ny haino aman-jery sosialy mety tsara indrindra amin'ny fikambanananao ianao dia tadidio ilay hevitra "kely kokoa". Na dia misy aza ny serivisy sasany manana loharanon-karena (olona, ​​fotoana, vola) hikirakira tambajotra sosialy maromaro, ny ankamaroan'ny serivisy kely kokoa dia tsy manana. Tsara kokoa ny misafidy tambajotram-pifandraisana tena ilaina ho an'ny orinasanao ary mifehy tsara azy ireo toy izay ny manandrana manao fifanarahana be dia be amin'ny iray karazana ary mifehy azy ireo amin'ny fomba ratsy.
Tambajotra sosialy nataon'i Sue Cockburn
VAKIO IZANY Fifamoivoizana amin'ny tranokala
Ny fametrahana rafitry ny fahombiazana amin'ny haino aman-jery sosialy dia mety ho sarotra sy diso hevitra diso haingana. Taloha, ity dia mety nanondro dokambarotra s Facebook, tsy misy ifandraisany amin'ny serivisinay ary tsy nifantoka tamin'ny mpihaino kendrena, noforonina mba hahatonga ny olona ho tia ny pejinay Facebook ary hanatsara ny laharan'ireo mpankafy anay. Rehefa mandeha ny fotoana ary tsy mitsaha-mitombo ny media sosialy, maro amintsika no nanaiky fa tena tsy misy ilana azy ireo mpankafy sy mpankafy 'novidina' ireo raha te hampivelatra am-pahatsorana ny anaran'ny tserasera sy ny orinasanay.
Raha misy fikambanana sasany manana loharanon-karena (olona, ​​fotoana, vola) hikirakira tambajotra sosialy maromaro, orinasa lehibe kely kokoa no tsy manana. Tsara kokoa ny misafidy tambajotra roa ilaina amin'ny orinasanao ary mifehy tsara azy ireo toy izay ny manandrana mandeha amin'ny maro isan-karazany ary mitantana azy ireo amin'ny fomba ratsy.
Lazao ny sainao hanafoana ny valin-